ကမ္ဘာ၏အဘယ်အရာ 8 အံ့သြစရာ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ကမ္ဘာ၏အဘယ်အရာ 8 အံ့သြစရာ?
Восьмое чудо света — город Петра в Иордании
ru.wikipedia ။ org / ဝီကီ / ပတေရုသ (အာကာသဖျက်နိုင်)
link ကိုစီမံကိန်းများ၏အုပ်ချုပ်ရေး၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ အသားတင် / အဝင် / အ 1215 (အာကာသဖျက်နိုင်)
ru.wikipedia ။ org / ဝီကီ / Vosmoe_chudo_sveta (အာကာသဖျက်နိုင်)
Восьмое чудо света — так уже называют курортно-гостиничный комплекс Marina Bay Sands, который открывают в Сингапуре. Три 55-метровых башни этого нового чуда света венчает трехпалубный корабль под названием Небесный парк площадью 12 400 кв. м.
ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာလူတွေကိုလူ့ဗိသုကာပါရမီသို့မဟုတ်သဘာဝအပြည့်စုံရာအရှိဆုံးအံ့သြဖွယ် display ရဲ့အရှိဆုံးထူးချွန်အကျင့်ကိုကျင့်၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကကိုဖေါ်ထုတ်ရန်, ကမ္ဘာ၏အံ့ဘွယ်သောအမှု၏အလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့စာရင်းရှိကြ၏။ ဤအစာရင်းများကိုအများစုဟာကမ္ဘာ၏ရှေးဟောင်းဂရိအံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးတွင်အပြီးခုနစျပါးဆုရှင်ရန်ကန့်သတ်ထားပေမယ့်ပိုပြီးအဆင့်မြင့်သို့မဟုတ်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့စာရင်းလည်းရှိပါတယ်ခဲ့ကြသည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပထမဦးဆုံးထိုကဲ့သို့သောစာရင်း V ကိုရာစုဘီစီ esch ဟီရိုဒိုးတပ်ခဲ့သည်။ အီး။ သူရေးထားသောစာများတွင်, သမိုင်း၏အဘရှေးခေတ်ကာလ၌ Ionian ယဉ်ကျေးမှု၏ဗဟိုခဲ့သည့်သုံးအံ့ဖွယ်အငူကျွန်း, စာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤရွေ့ကားအံ့ဖွယ်အ:
1 ။ တစ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ရစေီးရလောမွောငျး (ကီလိုမီတာလျှပ်စစ်မီးမြို့ရေပိုက်ကွန်ကိုထောက်ပံ့)
2 ။ ကျွန်းပေါ်တွင်ဆိပ်ကမ်းမှာရေကာတာ (ကကမ်းရိုးတန်းကိုကာကွယ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်)
3 ။ နတ်ဘုရား Hera ဗိမာန်တော်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် III ကိုရာစုဘီစီ။ အီး။ ကမ္ဘာ၏အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးတွင်တစ်ဦးဂန္စာရင်းဖွဲ့စည်းခဲ့:
1 ။ ဂီဇာ၏ဂရိတ်ပိရမစ် (Giza, 2550 ဘီစီ။ အီး),
2 ။ ဗာဗုလုန်မြို့ (ဗာဗုလုန်မြို့, 600 ဘီစီ။ အီး) ၏ဥယျာဉ်ကြိုးဆွဲချ,
3 ။ Olympia မှာဇု၏ရုပ်ထု (Olympia, 435 ဘီစီ။ အီး),
4 ။ ဧဖက်မြို့၌အာတေမိ၏ဗိမာန်တော်၌ (Efes, 550 ဘီစီ။ အီး),
5 ။ Halicarnassus ၏ဂူဗိမာန် (Halikarnas, 351 ဘီစီ။ အီး),
6 ။ အဆိုပါဒေဒန် Colossus (ထို 292 နှင့် 280 နှစ်အကြား Rhodes ။ ဘီစီ။ အီး),
7 ။ အာလေဇန္မီးပြတိုက် (အာလေဇန္, III ကိုရာစုဘီစီ။ အီး) ။
အဆိုပါ 2001 စီမံကိန်းတွင်ကမ္ဘာ၏ခေတ်သစ်အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးကိုသိရှိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့သည့်အကျိုးအမြတ်မယူအဖှဲ့အစညျးက New Open ကိုကမ္ဘာ့ကော်ပိုရေးရှင်းစတင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ကသီးခြားစီဗိသုကာနှင့်သဘာအံ့ဘွယ်သောအမှုဖော်ထုတ်ရန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအမျိုးအစားထဲတွင်ဆုရရှိသူဇူလိုင်လ72007 နှစ်ပေါင်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယအမျိုးအစားထဲမှာဆုရရှိသူ 2011 နှစ်တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။
1 ။ တရုတ် Great Wall
2 ။ Colosseum
3 ။ မာချူပီချူ
4 ။ ပတေရုသ
5 ။ Taj Mahal
6 ။ ခရစ်တော်၏ရုပ်တုဟာကိုရွေးနှုတ်သော
7 ။ Chichen Itzá
8 ။ ဂီဇာ၏ပိရမစ်
1 ။ Amazon နဲ့အမေဇုံတောနက်
2 ။ Halong
3 ။ အီဂွာဇူ
4 ။ Jeju ကျွန်း
5 ။ Komodo
6 ။ Puerto Princesa မြေအောက်မြစ်အမျိုးသားဥယျာဉ်
CNN မှာကမ္ဘာ၏ခုနစ်ခုမှာသဘာဝအံ့ဘွယ်သောအမှု, အား NBC:
အဆိုပါ 1997, အထုတ်လွှင့်က CNN မှာတော့က CNN ကသဘာဝအံ့ဘွယ်သောအမှု၏၎င်း၏စာရင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
1 ။ ဂရန်း Canyon အ
2 ။ Great Barrier Reef
3 ။ Rio de Janeiro မြို့၏ဆိပ်ကမ်း
4 ။ Dzhomolungma (ဧဝရက်)
5 ။ aurora Polaris
6 ။ မီးတောင်Parícutin
7 ။ ဗစ်တိုးရီးယားရေတံခွန်
ဘီဘီစီဘီဘီစီကနေကမ္ဘာ၏ 80 အံ့ဘွယ်သောအမှု:
အဆိုပါ 2005 မှာတော့ဘီဘီစီဘီဘီစီရုပ်သံလိုင်း (eng ။ ကမ္ဘာ့ဖလားခန့် 80 ဘဏ္ဍာအတွက်) ခေါင်းစဉ်ကမ္ဘာ့ဖလား၏ 80 အံ့ဖွယ်အောက်မှာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခုစီးရီးထုတ်လွှင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အီစတာကျွန်း, United States မှာ Liberty ၏ရုပ်ထု, အင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့ဘောရောဗုဒ္ဓေါဒကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာရှုပ်ထွေးခြင်း, ဧကရာဇ်တားမြစ်ထားစီးတီးနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းရှိရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တုကြည်းတပ်, Meenakshi ဘုရားကျောင်းအပေါ် MOAI သောကျောက်ရုပ်ပွားတော်, ပီရူးအတွက်နာ့ဇ်ကာလိုင်းအပါအဝင်ခဲ့ကြသည်အနုပညာနှင့်ဗိသုကာများ၏မရွေးအကျင့်ကိုကျင့်တွေထဲမှာ အိန္ဒိယ, အီရန် Persepolis, လစ်ဗျား Leptis မဂ္ဂနာ, ဂရိ Parthenon, အ Solovetsky ရုရှားတွင်ကျွန်းများနှင့်အခြားအံ့ဘွယ်သောအမှု။
ရင်းမြစ်: ru.wikipedia.org/wiki/ Chudesa_sveta (အာကာသဖျက်နိုင်)
Elbrus အရှည်မ 8 5653 မီတာ
အိန္ဒိယ၌ဤ Taj Mahal
ကောင်းပြီ napriimer Hermitage ရေးရန်
Posted in, ဗိသုကာ, ပန်းပု
မှတ်ချက် Add ပြန်ကြားချက်ကိုပယ်ဖျက်
သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုထုတ်ဝေမည်မဟုတ် တောင်းဆိုနေတဲ့လယ်ယာမှတ်သားထားတဲ့ *
© Copyright 2017 - 2020 အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
64 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,235 စက္ကန့်ကျော် Generate ။